YINTONI ENOKULINDELWA NGABALANDELI KUVUKANI? - IIMUVI
Vuka ngumdlalo bhanyabhanya ozayo wohlobo lomdlalo weqonga / isayensi-fiction / Thriller. UMark Raso uyalele le filimu, ethathwe kumdlalo bhanyabhanya
Vuka ngumdlalo bhanyabhanya ozayo wohlobo lomdlalo weqonga / isayensi-fiction / Thriller. UMark Raso uyalele le vidiyo, ethathwe kwiscreenplay awayibhalayo noJoseph Raso noGregory Poirier. Inika uGina Rodriguez okhokelayo, uJennifer Leigh, uBarry pepper, uFinn Jones, uShamami Anderson, uAriana Greenblatt, uFrances Fisher, uLucius Hoyos, kunye noGil Bellows.
UMlawuli: UMark Raso
Umvelisi: UMark Gordon
Umdlalo webhanyabhanya: UMark Raso, uJoseph Raso, uGregory Poirier
Ibali: UGregory Poirier
Abalingisi: UGina Rodriguez njengoJill (umama kaMatilda), uBarry Pepper, uShamami Anderson, uFinn Jones Ariana Greenblatt njengentombi kaJill, uFrances Fisher, uLucius Hoyos, uGill Bellows, uJennifer Jason Leigh
Umhleli: UMichele conroy
Imveliso Inkampani: Ukuzonwabisa
ICinematography: UAlan Poon
Ilizwe: eunited States
Vuka- Ukuza kwiNetflix
Umboniso bhanyabhanya uya kukhupha kwaye usasaze ngo-2021 yiNetflix. Ibali lomdlalo bhanyabhanya lilandela uhlanga loluntu lokusindisa umhlaba emva kokutshatyalaliswa okukhulu kwehlabathi okususe amandla okulala kunye nokususa ii-elektroniki zabathengi. Ihlabathi lidliwe ziziphithiphithi. Ukukhanya kwethemba kuza ngejoni langaphambili, uJill, onokunceda ngentombi yakhe. Umbuzo ujikeleze uJill kunye namandla akhe okusindisa umhlaba ngaphambi kokuba aphulukane nengqondo. Ngo-Meyi ka-2019, uGina Rodriguez naye wajoyina isamente.
izigebenga iingqondo isizini 7 isiqendu 2 cast
UGina Rodriguez -inkwenkwezi evelayo!
UGina Rodriguez ebonwe ngaphambili kumdlalo omncinci wescreen 'Jane The Virgin,' kodwa mva nje, unomsebenzi ojolise ekugxininiseni njenge 'Annihilation'. Kule movie, uMark Raso usebenze nomntakwabo uJoseph noPoirier. Vuka uya kubona imeko-apocalyptic apho uJill azakufuna ukusindisa umhlaba.
Okwangoku, impendulo ibonakala ngathi mhlawumbi?
Umtyholi undenze ukuba ndiyenze amazon prime
Vukani- Ngaba yiApocalypse?
Umboniso bhanyabhanya wenze i-buzz esele iphakathi kwabalandeli. Ibali libonakala linomdla. Izixhobo kunye nezinto ze-elektroniki ezisuswe eluntwini; Amandla abo okulala kunye nomsebenzi nawo athathiwe. Ihlabathi liza kuwa. Abalandeli banemincili ngoRodriguez, ophumelele iGlobe yeGolide, ngendima yakhe ephezulu njengoJane kwi-sitcom uJane The Virgin. I-sitcom ngoku iyasebenza kwaye ngoku ikwixesha layo lokugqibela, lesihlanu. URodriguez usebenze ngeNetflix kulo nyaka njengoko ebonakalisile kwimidlalo yothando, 'Umntu Omkhulu'. URodriguez osebenza njengoJill ubonakala ethembisa kwi-teaser emfutshane esiyibonileyo. I-trailer esemthethweni ayikabikho, kwaye akubangakho magama ngomhla wokukhutshwa komdlalo bhanyabhanya.
Nangona kunjalo, uGina Rodriguez uphawule ngokusemthethweni ngemovie ekwipayipi. Sele ezibandakanye nabalingisi apho kugqitywa khona onke amalungu, kwaye wabonakala emnandi kukuzibandakanya kwakhe kumdlalo bhanyabhanya. Kudliwanondlebe olufutshane, wakhankanya yonke into ekubeni ‘lusana lutsha,’ ke wayengenanto angabelana ngayo nabo bonke abalandeli bakhe, ngaphandle kohlobo lomdlalo bhanyabhanya.
INetflix liqonga elahlukileyo, kwaye ngenxa yesifo, uninzi lwabadlali abaphambili baye bavela kwiNetflix okanye kwenye inkonzo yokusasaza. Isebenza kwaye ngoku isebenza kwiiprojekthi ezintsha eziza kukhutshwa ngo-2021. Kuba sonke besiphila kwaye siphumelela ngubhubhane, ibali elilandelayo le-apocalypse liza kuphinda libekho kubaphulaphuli.
Kuyachulumancisa njengempumelelo edlulileyo yeeprojekthi zeNetflix ezinjengebhokisi yeentaka, kwaye kukho ubungakanani bokuvuka kukaVukani kumnombo wakutshanje.
UGina ubeyinkwenkwezi evelayo eHollywood. Xa uVukani ebetha iNetflix, siyokwazi ukuba le projekthi iyatsiba kubume bakhe.
Uluhlu lweefilimu zoopopayi ezihlekisayo ze-2016 dc
Esinye isizathu sokuba negalelo kulonwabo nguMark Ruso, umlawuli wefilimu. Unokuba ngomnye wabalawuli abaqaqambe abavela eToronto kule minyaka ingama-20 idlulileyo. ICopenhagen yango-2014 ngumboniso bhanyabhanya ophume izandla. Namhlanje, uyimveliso yasemva kokuphuma kwifilimu ephambili, iKodachrome, ebonisa izinto ezinzima zaseHollywood.
ubuya nini umnyama omnyama
mrs maisel ixesha lesi-4
ibonisa njengeqhawe lam lezemfundo
ngu-anne kunye no-e ukubuya
Iifilimu ze-dc zoopopayi ngo-2019
Ngaba i-clover emnyama iza kubuya